के गर्भवती महिलालाई यौ:न सम्पर्क गर्दा बच्चालाई असर गर्छ ? – Dainik Samchar
March 19, 2021 359
लगातार यौ न सम्पर्क गरीरहँदा जब म’हिना’वारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा गर्भ रहेको जानकारी पाइन्छ । लगातार स’म्पर्क गर्दा ग’र्भपत’न हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक भएकाले गर्भ अवस्थामा स’म्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।
गर्भावस्थामा स’म्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग’र्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो, असहजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आसनमा स’म्पर्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आसनमा स’म्पर्क गर्नुभयो भने महिला, बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन । ग’र्भा’वस्थामा महिलाको मनमा प्रेमका भावहरु बढि आउने हुँनाले त्यो कुरालाई जोडिले ख्याल राख्नु गरुरी हुन्छ ।
ब्लि’डिङ हुने कारण भनेको ग’र्भ’रहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुने कुरा हो । यो ग’र्भावस्थाको सबैभन्दा जो’खिम पुर्ण अवस्था हो । यदि पटक पटक ब्लि’डि’ङ हुने, गर्भपटन हुने महिलाहरुले सम्पर्कमा केहि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर स’म्पर्क गरेकै कारण ब्लि’डिङ हुने भन्नेहुँदैन।
यदि गर्भवती महिलालाई गर्भको कारणले गाह्रो भइरहेको छ, महिलालाई इच्छा नै छैन तर तपाई त्यस्तो अवस्थामा पनि ज’बरज’स्ती सम्पर्क गर्नु भयो भने त्यो करणी हुन्छ, यदितपाई आफ्नो जोडि लाई साच्चै नै माया गर्नुहुन्छ, भावनात्मक बिश्वास छ भने त्यो बेलामा तपाईलाई सम्पर्क गर्नै मन लाग्दैन । त्यसैले तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा गर्भावस्थामा रहेकी महिलाले पनि इच्छा देखाइनभने मात्र सम्पर्क गर्नुपर्दछ ।
पेट सफा राख्ने यी हुन् प्राकृतिक तरिका
कहिले कहिँ खाना खाइरहेको बेला हामीलाई थाहा हुँदैन कि, हामीले कति खायौं, के खायौं ? रोगको कारण यही नै हो । भनिन्छ, विश्वमा खान नपाएर होइन, खान नजानेर धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । खान नजानेरै हो, रोगी भएको पनि । के भनिन्छ भने, तमाम रोग पेटबाट सुरु हुन्छ ।
यदि पेट स्वस्थ्य भयो भने समग्र रुपमा हामी स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुन सक्छौ । अतः पेटलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि अतिरिक्त औषधी खाइरहनु पर्दैन, न उपचारकै आवश्यक छ । सहि एवं समुचित खानपान र सहि खाने तालिकाले पेट सफा हुन्छ । त्यसबाहेक केहि प्राकृतिक उपाय छ, जसले पेटलाई स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ ।
– बिहान उठ्नसाथ खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुपर्छ । दुई वा तीन गिलास पानी पिइसकेपछि शौंच क्रिया गर्नुपर्छ । – खानामा हरियो सागपात सामेल गर्नुपर्छ, जसमा उच्च फाइबर छ । यस किसिमको खानाले पाचन यन्त्र बलियो हुन्छ । – एकसाथ धेरै खाना खानु हुँदैन, जो पचाउन गाह्रो हुन्छ । –चिल्लो, तारेको, मसलेदार खानेकुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ ।
– खाना खाइसकेपछि सलादको रुपमा गोलभेडा सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ । अझ त्यसमाथि वीरे नुन छर्कनुपर्छ, राम्रो हुन्छ । संभव भएसम्म मासुजन्य परिकार त्याग्नुपर्छ वा कम सेवन गर्नुपर्छ ।
– पुदिना पाचन क्षमता बढाउन उपयोगी हुन्छ । त्यस्तै मेवाले पनि पेट तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । – अदुवाको टुक्रामा नुन छर्किएर दिनमा केहि पटक सेवन गर्नुपर्छ, पेट सफा हुन्छ ।
पाचन क्षमता बढाउने फल
पाचन क्षमताका लागि कतिपय फल उपयोगी हुन्छ । यदि तपाईको पाचन क्षमता राम्रो छ भने प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुन्छ । त्यसले गर्दा शरीरमा अन्य रोग लाग्न पाउँदैन ।
स्याउ- दिनमा कम्तिमा एउटा स्याउ सेवन गर्नु पेटका लागि अति लाभदायक हुन्छ । यसमा रहेको भिटामिन सि, भिटामिन ए, फोलेट, खनिज, पोटाशियम र फोस्फोरसले पाचनमा राम्रो फाइदा पुग्छ ।
केरा- मल त्यागका लागि केरा एकदमै लाभदायक फल हो । फाइबरले भरपुर केराले पाचन यन्त्रमा राम्रो सघाउ पुर्‍याउँछ । पखला लागिरहेको अवस्थामा केरा अझ बढी उपयोगी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यसको इलेक्ट्रोलाइट्स र पोटायिशमले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
एभोकाडो-भिटामिन सिले भरपुर एभोकाडो फाइबरको पनि राम्रो स्रोत हो । यो फल सेवन गर्दा पाचन यन्त्र बलियो हुन्छ । मेवा- मेवामा भिटामिन, ए, बि र सी पाइन्छ । यसले शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ ।
आरु- पोटाशियम, फाइबर, आइरन, क्याल्सियम र भिटामिन सिले भरपुर आरु पौष्टिक हुनका साथै स्वादिलो पनि हुन्छ । यस फलको सेवनले पाचन यन्त्र तन्दुरुस्त हुन्छ ।
किवी- जसलाई पाचन सम्बन्धी समस्या छ, उनीहरुले किवी फल सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा भिटामिन सि, भिटामिन इ, लिोनालेनिक एसिड, एक्टिनिडिन, पोटाशियम, म्याग्नेशियम र अन्य फ्याडी एसिड हुन्छ, जसले पचाउनमा सहयोग गर्छ । यसका साथै किवीमा पेप्सिन पाइन्छ । पाचन यन्त्रले राम्ररी काम गर्नका लागि पेप्सिनको एकदमै आवश्यक हुन्छ ।
Prevकलेज पढन गएकी १९ बर्षिय ‘अमिषा’ काठमान्डौंबाट बेपत्ता, खोजिदिन परिवारजनको गु’हार !
Nextपरीक्षामा ९९.९८ प्रतिशत आएपछि पुन: परीक्षा दिँदै पल अग्रवाल